2 Madzimambo 4:1-44
4 Zvino kwaiva nomumwe mukadzi pamadzimai evanakomana+ vevaprofita akachemera Erisha, achiti: “Mushandi wenyu, iye murume wangu, akafa; uye imi munonyatsoziva kuti mushandi wenyu aitya+ Jehovha nguva dzose, zvino mukweretesi+ auya kuti atore vana vangu vaviri kuti vave varanda vake.” 2 Erisha akati kwaari: “Ndokuitireiko?+ Ndiudze; unei mumba?” Iye akati: “Mushandikadzi wenyu haana kana chaainacho mumba kunze kwechirongo chemafuta chine muromo muduku.”+ 3 Iye akabva ati: “Enda unokumbira midziyo kunze, kuvavakidzani vako vose, midziyo isina chinhu. Usakumbira mishoma. 4 Upinde mumba wovhara suo iwe nevanakomana vako muri mukati, udire mumidziyo yose iyi, inenge yazara uise parutivi.” 5 Naizvozvo akabva kwaari. Paakavhara suo iye nevanakomana vake vari mukati, ivo vaiuya nemidziyo yacho pedyo naye, iye achidira.+ 6 Zvino midziyo yacho payakanga yangozara, akati kune mumwe wevanakomana vake: “Uya nomumwe mudziyo pedyo neni.”+ Asi akati kwaari: “Hapasisina mumwe mudziyo.” Mafuta acho akabva agumawo.+ 7 Naizvozvo akapinda, akaudza munhu waMwari wechokwadi, iye akabva ati: “Enda utengese mafuta acho, uripe zvikwereti zvako,+ iwe nevanakomana vako murarame neanosara.”+ 8 Zvino rimwe zuva Erisha akapfuura nokuShunemi,+ kwaiva nomumwe mukadzi akanga akakurumbira, uye mukadzi wacho akatanga kumumanikidza+ kuti adye zvokudya. Kazhinji paaipfuura nepo, aitsaukira ikoko kuti adye zvokudya. 9 Akazoti kumurume wake:+ “Zvino tarirai, ndinonyatsoziva kuti uyu anogara achipfuura nepano munhu mutsvene waMwari.+ 10 Ndapota, ngatimuvakirei imba duku yepamusoro pedenga+ parusvingo, timuisire mubhedha netafura nechigaro nechigadziko cherambi+ imomo; uye nguva dzose paanouya kwatiri atsaukire imomo.”+ 11 Zvino rimwe zuva akaenda ikoko senguva dzose, akatsaukira muimba yepamusoro pedenga, akarara imomo. 12 Naizvozvo akati kuna Gehazi+ mushandi wake: “Shevedza mukadzi uya muShunemi.”+ Akamushevedza kuti amire pamberi pake. 13 Akabva ati kwaari: “Ndapota, iti kwaari, ‘Tarira wakazvinetsa kwazvo nokuda kwedu.+ Unoda kuitirwei?+ Pane chinhu chero chipi zvacho chandingataura kuna mambo+ kana kumukuru+ weuto nokuda kwako here?’” Iye akati: “Ndiri kugara pakati pevanhu vokwangu.”+ 14 Iye akati: “Saka, oitirwei?” Zvino Gehazi akati: “Chokwadi, haana mwanakomana,+ uye murume wake akwegura.” 15 Iye akabva ati: “Mushevedze.” Naizvozvo akamushevedza, mukadzi wacho akaramba akamira pasuo. 16 Zvino iye akati: “Panguva ino yakatarwa gore rinouya uchange wakagumbatira mwanakomana.”+ Asi akati: “Aiwa, tenzi wangu, haiwa munhu waMwari wechokwadi! Musarevera mushandikadzi wenyu nhema.” 17 Zvisinei, mukadzi wacho akava nepamuviri, akabereka mwanakomana+ panguva yakatarwa gore rakatevera racho, sezvaakanga audzwa naErisha.+ 18 Mwana wacho akaramba achikura, uye rimwe zuva akaenda kwaiva nababa vake nevakohwi+ sezvaaigara achiita. 19 Akaramba achiti kuna baba vake: “Musoro wangu, musoro wangu kani!”+ Ivo vakazoti kumushandi: “Mutakure uende naye kuna amai vake.”+ 20 Naizvozvo akamutakura akaenda naye kuna amai vake. Akaramba akagara pamakumbo avo kusvikira masikati, uye akazofa.+ 21 Vakabva vakwira, vakamuradzika pamubhedha+ womunhu waMwari+ wechokwadi, vakamuvharira imomo, vakabuda. 22 Zvino vakashevedza murume wavo vakati: “Ndapota, nditumirei mumwe wevashandi nembongoro hadzi imwe chete, ndimhanyire kumunhu waMwari wechokwadi ndidzoke.”+ 23 Asi iye akati: “Uri kuenderei kwaari nhasi? Hakusi kugara kwomwedzi+ kana sabata.” Zvisinei iye akati: “Hazvina mhosva.” 24 Naizvozvo akasungirira chigaro pambongoro hadzi+ akati kumushandi wake: “Ifambise urambe uchienda. Usandinonotsa kuenda kutoti kana ndakuudza saizvozvo.” 25 Akaenda, akasvika kumunhu waMwari wechokwadi kuGomo reKameri. Zvino munhu waMwari wechokwadi paakangomuona achiri kure, akabva ati kumushandi wake Gehazi:+ “Tarira! Mukadzi muShunemi ari uko uyo. 26 Zvino ndapota, mhanya umuchingure, uti kwaari, ‘Unofara here? Murume wako anofara here? Mwana anofara here?’” Mukadzi wacho akati: “Vanofara.” 27 Paakasvika kumunhu waMwari wechokwadi pagomo, akabva abata tsoka dzake.+ Gehazi akaswedera pedyo kuti amusundire kure,+ asi munhu waMwari wechokwadi+ akati: “Musiye,+ nokuti mweya wake une shungu+ mukati make; uye Jehovha andivanzira+ izvozvo, haana kundiudza.” 28 Zvino iye akati: “Ndakakumbira mwanakomana nokunashe wangu here? Handina here kuti, ‘Musaita kuti ndive netariro yenhema’?”+ 29 Iye akabva ati kuna Gehazi:+ “Zvisunge muchiuno,+ utore mudonzvo+ wangu uuise muruoko rwako uende. Kana ukasangana nomunhu, usamukwazisa;+ kana munhu akakukwazisa, usamupindura. Unofanira kunoisa mudonzvo wangu pachiso chomukomana wacho.”+ 30 Mai vomukomana wacho vakati: “NaJehovha mupenyu+ uye nomweya wenyu mupenyu,+ handisi kuzokusiyai.”+ Naizvozvo iye akasimuka akaenda naye. 31 Gehazi akaenda mberi kwavo, akanoisa mudonzvo pachiso chomukomana wacho, asi kwakanga kusina inzwi kana kuteerera.+ Naizvozvo akadzoka kuzosangana naye akamuudza kuti: “Mukomana wacho haana kumuka.”+ 32 Erisha akazopinda mumba, akawana mukomana wacho akafa, akaradzikwa pamubhedha wake.+ 33 Akabva apinda, akavhara suo vaviri vacho vari mukati,+ akatanga kunyengetera kuna Jehovha.+ 34 Akazokwira pamubhedha, akarara pamusoro pomwana+ akaisa muromo wake pamuromo wake nemaziso ake pamaziso ake nezvanza zvake pazvanza zvake, akaramba akatsivama pamusoro pake, nyama yomwana ikatanga kudziya zvishoma nezvishoma. 35 Akabva atanga kufambazve mumba macho, akafamba achienda uku uye akafamba achienda uko, achibva azokwira pamubhedha, akatsivama pamusoro pake. Mukomana akahotsira kanomwe, mukomana wacho achibva azosvinura.+ 36 Zvino akashevedza Gehazi akati: “Shevedza mukadzi uyu muShunemi.”+ Naizvozvo akamushevedza, akapinda maaiva. Akabva ati: “Simudza mwanakomana wako.”+ 37 Iye akapinda, akawira patsoka dzake, akamukotamira,+ achibva azosimudza mwanakomana wake, akabuda.+ 38 Erisha akadzokera kuGirigari,+ uye munyika macho maiva nenzara.+ Vanakomana+ vevaprofita zvavakanga vakagara pamberi pake,+ kwapera nguva yakati, iye akati kumushandi wake:+ “Isa hari huru yokubikira pamoto, ubikire vanakomana vevaprofita zvokudya.”+ 39 Naizvozvo mumwe akaenda kusango kuti anotanha mamaro,+ akawana muti womusango unotandira, akatanha mapudzi omusango pauri, akazadza nguo yake akabva auya, akaachekerera muhari yezvokudya, nokuti vakanga vasingaazivi. 40 Gare gare vakaapakurira varume vacho kuti vadye. Pavakangodya zvokudya zvacho, vakashevedzera vakatanga kuti: “Haiwa munhu waMwari wechokwadi,+ muhari mune rufu.”+ Havana kukwanisa kuzvidya. 41 Naizvozvo akati: “Saka torai furawa.” Pashure pokuikanda muhari, akati: “Pakurirai vanhu vadye.” Zvino muhari makanga musisina chinhu chinokuvadza.+ 42 Zvino mumwe murume akabva kuBhaari-sharisha,+ akauya+ kumunhu waMwari wechokwadi nezvokudya zvezvibereko zvokutanga,+ zvingwa zvebhari makumi maviri,+ nezviyo zvitsva zvaiva muhomwe yake yezvokudya. Akabva ati: “Ipa vanhu kuti vadye.”+ 43 Asi mushandi wake akati: “Ndingaisa sei izvi pamberi pevarume zana?”+ Iye akati: “Ipa vanhu kuti vadye, nokuti zvanzi naJehovha, ‘Vachadya pakasara zvimwe.’”+ 44 Akazviisa pamberi pavo, vakadya, vakasiya zvimwe maererano neshoko raJehovha.+